केपी ओलीको आग्रहमा डा.ज्ञवालीको सरुवा रोकिएको हो ? हेर्नुहोस् पत्र
आश्विन ०२, २०७८ ०८:१४ मा प्रकाशित
भक्तपुरस्थित शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकबाट डा. प्रेमराज ज्ञवालीलाई हटाइएको छ । भदौ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार डा. ज्ञवाली प्रत्यारोपण केन्द्रको निर्देशकबाट हटाइनु भएको हो।
उहाँलाई डेढ वर्षअघि ४ वर्षका लागि प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो। डा.ज्ञवालीलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै फिर्ता पठाइएको छ ।
ओलीको आग्रहमा फिर्ता गरिएको हो ?
प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकबाट डा.ज्ञवालीलाई हटाइएको भएपनि केही मिडियाले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रहमा ज्ञावालीको सरुवा रोकिएको भनी खबर दिएका छन् ।ती खबरमा दावी गरिए अनुसार ज्ञवालीको सरुवा नरोकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रत्यारोपण केन्द्रको निर्देशकबाट हटाएर त्रिवि शिक्षण अस्पताल, चिकित्सा शिक्षा क्याम्पसमा फिर्ता गरिएको पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति तथा योजना महाशाखाले डा.ज्ञवालीलाई पठाइसकेको छ।
महाशाखा प्रमुख डा.गुणराज लोहनीले डा.ज्ञवालीलाई भदौ २९ गते नै सरुवाको पत्र पठाइसक्नु भएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका सर्जन रहनुभएका डा. ज्ञवालीले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने कार्यको नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।
मिर्गौला प्रत्यारोपणमा खेलेको भूमिकाको गुण तिर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले डा.ज्ञवालीलाई प्रत्यारोपण केन्द्रको प्रमुखको जिम्मेवारी दिनुभएको चर्चा पनि चलेकाे थियाे ।
ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्न मावन अंक प्रत्यारोपण विकास समिति गठन कार्यविधि बाधक भएको थियो । कार्यविधि अनुसार उक्त पदमा सरकारी डाक्टर मात्रै नियुक्त हुनसक्ने व्यवस्था थियो ।
शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत डा. ज्ञवालीलाई प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नकै लागि उक्त कार्यविधि संशोधन गरिएको थियो ।
उक्त संशोधित कार्यविधिकै दफा ६ को उपदफा (७) बमोजिम डा.ज्ञवालीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान, चिकित्सा शिक्षा क्याम्पसमा फिर्ता गरिएको मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ ।
सरुवा पत्र नै दिइसकेको अवस्थामा सरुवा रोकिएको भनेर आएका खबरमा सत्यता नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले स्पष्ट पारेको छ । ‘कि सत्य कुरा नबुझी हल्लाका भरमा समाचार आए कि डा.ज्ञवाली आफैँले यस्तो प्रचार गर्न लगाउनु भएको हो’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्नुहुन्छ ।
डा. ज्ञवालीको सरुवा रोकिएको भन्ने कुनै जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नआएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।